အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Phyoewaiaung26 - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:IMG 20150218 113728.jpg
(2000-08-24) ၂၄ ဩဂုတ်၊ ၂၀၀၀ (အသက် ၂၁)
User infobox အတွက် Template:Infobox user တွင်ကြည့်ပါ။
ပီမိုးနင်းအကြောင်း ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဒိုရေးထားတာက ပီမိုးနင်းစာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်တင်ပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဝီကီပီဒီယားဆိုတာ အဲဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘဲ (လိုအပ်သော စာပုဒ်ကိုတော့ quote လုပ်နိုင်ပါတယ်) သူ့စာအုပ်အကြောင်း ရေးသင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ အချိန်၏သမိုင်း အကျဉ်း) ဒါမှမဟုတ် ပီမိုးနင်းအကြောင်းဆိုရင် အတ္ထုပတ္တိပုံစံပေါ့ဗျာ၊ (ဥပမာ စတီဖင်ဟော့ကင်း) ဒီလိုလေးပေါ့။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ခေါင်းစဉ် Title ကို P.Morning အစာ မြန်မာလို ပီမိုးနင်း လို့ပေးသင့်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းရခက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေကလွဲရင် မြန်မာလိုပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါကြောင်း။ Dr Lotus Black (talk) ၁၈:၀၄၊ ၂၃ နို​ဝင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
sexually explicit article[ပြင်ဆင်ရန်]
This article you recently created was nominated for deletion due to inappropriate title and writing. Wikipedia is not censored. However, offensive words and offensive images should not be included unless they are treated in an encyclopedic manner. Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၃၈၊ ၆ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
This is neither porn site nor any other persomal blogs so you may need to read wikipedia rule before making articles. Instead of making such things; you can fix typing error and so on. Make yourself worthty in wikipedia. Dr Lotus Black (talk) ၀၉:၂၀၊ ၆ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
File:MWAK.JPG ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:MWAK.JPG ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၁၊ ၃ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Phyoewaiaung26&oldid=301970" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ မေ ၂၀၁၆၊ ၁၆:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။